Sida loo edit gareeyo PDF files on Mac | waxaan ka imid mac
Anigu waan ahaydeMac
Sida loo edit gareeyo PDF files on Mac
Qolka Ignatius | | Mac OS X, Tababarada
Qaabka PDF, ee ka yimid Adobe, wuxuu noqday halbeegga xisaabinta wuxuuna noqday kan ugu weyn, waxaanan dhihi karnaa, kaliya qaab ku wadaag nooc kasta oo dukumeenti ah intarneedka. Ahaanshaha qaabka caadiga ah, sida qaabka .zip-ka ee lagu cadaadiyo faylasha, furitaanka faylasha qaabkan uma baahna codsi in la rakibo.
Si kastaba ha ahaatee, arrimuhu way adkaadaan markaan rabno wax ka beddel waxyaabahaaga, maadaama uu ka duwan yahay qaabka .docx ee Microsoft Word, looguma talagelin in la tafatiro, laakiin kaliya in la wadaago. Nasiib wanaag, waxaa jira codsiyo noo oggolaanaya inaan wax ka beddelno nuxurka faylalka PDF ee Mac.
Marka xigta, waxaan ku tusinaynaa codsiyada ugu fiican PDF ku beddel MacCodsiyada aan u kala qaybin doono laba qaybood: bilaash iyo lacag. Maaddaama xalalka bilaashka ah ay had iyo jeer yihiin kuwa ugu baahida badan, inta badan isticmaalayaasha leh baahiyo gaar ah, waxaan ku bilaabaynaa kuwan.
1 Tafatirayaasha PDF ee bilaashka ah ee Mac
1.2 LibreOffice Draw
1.3 Xirfadlaha PDF
2 Tifaftirayaasha PDF ee Mac
2.1 Khabiirka PDF
2.2 Adobe Acrobat
2.3 PDFElement - Tifaftiraha PDF iyo OCR
3 Tifaftirayaasha PDF online
Tafatirayaasha PDF ee bilaashka ah ee Mac
Hagaag, barnaamijka horudhaca macOS ee asalka ah ma aha tafatiraha faylka PDF, laakiin waa ikhtiyaar aad u fiican in la tixgeliyo haddii waxa kaliya ee aan rabno ay tahay in lagu daro qoraallada qoraalka ah ee faylalka leh qaabka PDF.
Haddii baahiyahaagu aanay ku lug lahayn wax ka beddelka dukumeentiga qaabkan ah, laakiin taa beddelkeeda kaliya waxaad rabtaa inaad qaar ku darto Sixitaan kale, ma aha lagama maarmaan in la isticmaalo codsiyada kale, gaar ahaan, haddii ay tahay kiis aad u gaar ah oo aan caadi ahayn maalintaada.
Qalabka bilaashka ah ee LibreOffice ay noo diyaariso oo aan ku abuuri karno nooc kasta oo dukumeenti ah, waxaa ku jira codsiga Sawirka, a Tafatiraha sawirka ku habboon qaabka Adobe.
Codsigan, waan awoodnaa wax ka beddel faylasha PDF si loo beddelo waxa ku jira oo hadhow dib loogu dhoofiyo qaab la mid ah si loo ilaaliyo wax ka beddelka.
para soo dejiso LibreOfficeDraw, waa in aan soo dejisanay dhammaan codsiyada iyada oo loo marayo ku xiga isku xirka
PDF Professional Suite waa codsi aan kaliya noo ogolayn wax ka beddel faylasha PDF, laakiin sidoo kale waxay noo ogolaataa inaan ka abuurno qaab kasta.
Codsigan waxa uu bixiyaa hawlo kala duwan oo dhamaystiran sharax, arag, buuxi foomamka, saxeex, wax ka beddel, calaamade, dulmar, isku dar, kala qaybin, cadaadi… Intaa waxa dheer, waxa ay sidoo kale noo ogolanaysaa in aan u badalno faylalka PDF-ga faylalka Word/HTML/TXT/PNG/JPG.
Codsiga xirfadlaha ah ee PDF ayaa diyaar kuu ah soo dejiso gabi ahaanba bilaash ku dhex jira Mac App Store iyada oo la marayo isku xidhka soo socda.
In kasta oo Inkscape yahay qalab sawir, waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa sidii Tifatiraha faylka PDF, ilaa inta, marka la furayo dukumeenti, waxaan hubinaynaa ikhtiyaarka soo dejinta qoraalka sida qoraalka habka beddelka. Marka aan tafatirno dukumeentiga, waxaan markale u dhoofin karnaa qaabka PDF.
Haddii dukumeenti PDF ah ay tahay inaad wax ka beddesho, ku dar sawir kasta oo aad rabto inaad wax ka qabato, Codsiga aad u baahan tahay, haddii aadan si joogto ah u isticmaalin tifaftiraha sawirka ama aad rabto inaad waqti yar ku lumiso intii suurtagal ah, waa Inkscape.
Waxaad awoodi kartaa soo deji inkscape gabi ahaanba bilaasha ah mac Iyada oo loo marayo xidhiidhkan. Codsigan sidoo kale waa la heli karaa, sidoo kale gabi ahaanba waa bilaash, waayo Windows iyo Linux.
Skim waa codsi bilaash ah waxay kordhisaa awoodaha barnaamijka horudhaca macOS. Codsigan waxa loo nashqadeeyay sidii qalab lagu daawado laguna qeexo maqaallada sayniska (loo yaqaan waraaqaha). Barnaamijka waxaa loo isticmaali karaa in lagu eego fayl kasta oo PDF ah.
Waxa ugu xun ee ku saabsan app this waa ay interface, interface ah oo runtii waqti qaadata si aad ula qabsato si aad si raaxo leh ugu shaqeyso maalin kasta.
Iyadoo Skim, waxaan ku eegi karnaa faylasha PDF shaashad buuxda, ku dar oo wax ka beddel qoraallada ku jira dukumeentiga, Qoraallada dhoofinta qoraal ahaan, waxay ku habboon tahay Spotlight, waxay noo ogolaaneysaa inaan muujinno qoraalka ugu muhiimsan, waxaa ku jira qalab wax- goosasho caqli-gal ah ...
Waan awoodnaa soo deji Skim oo bilaash ah iyada oo loo marayo tan isku xirka.
Tifaftirayaasha PDF ee Mac
Mid ka mid ah codsiyada dhammaystiran Waxaa laga heli karaa dukaanka Mac App-ka waa PDF Khabiir, oo ah abka ka socda isla horumariyeyaasha boostada Spark. Codsigan, waxaan ku tafatiran karnaa nooc kasta oo dukumeenti ah sidoo kale waanu samayn karnaa, ku dari karnaa ilaalin, shahaadooyin...
Khabiirka PDF: Wax ka beddel PDF Waxaa lagu qiimeeyaa 79,99 euro oo ku yaal Mac App Store.
Khabiirka PDF: wax ka bedel PDF79,99
Ahaanshaha Adobe abuuraha qaabka PDF, mid ka mid ah codsiyada ugu fiican ee lagu shaqeeyo nooca faylka waa Adobe Acrobat. Codsigan, kaliya kuma beddeli karno faylasha qaab PDF ah, laakiin sidoo kale waan awoodnaa samee, ku dar meelo aad ku buuxiso dukumeenti hore loo sameeyay, ku ilaali dukumeentiyada furaha sirta ah, ku dar shahaado...
Sida loo isticmaalo Adobe Acrobat Adobe Creative Cloud waa la iska diiwaan gelinayaa, marka ilaa aad si joogto ah u isticmaashid arjigan, ma istaahisho inaad bixiso rukunka bisha.
PDFElement - Tifaftiraha PDF iyo OCR
PDFElement waa codsi kale oo xiiso leh in la tixgeliyo, ilaa inta aad inta badan ku shaqeyso faylasha qaabkan, maadaama ay lagama maarmaan tahay. bixi bille, saddexdii biloodba mar ama sannadkiiba. Faa'iidada kaliya ee marka la barbar dhigo ta ay bixiso Adobe Acrobat waa inay ka jaban tahay.
PDFElement waan awoodnaa wax ka beddel faylalka PDF, ku dar calaamado iyo faallooyin nooc kasta ah, ka samee faylasha PDF qaabab kale, samee oo buuxi foomamka nooc kasta ah, saxiix PDF, dukumeenti kooxeed...
PDFelement-Tafatiraha PDF iyo OCRfree
Tifaftirayaasha PDF online
Inkasta oo aanay ahayn hab raaxo leh iyo kuma martiqaado si ay u ilaaliyaan qarsoodiga, xal kale oo xiiso leh marka tafatirka faylasha PDF waxaa laga helaa shabakadda Yar-yar.
Smallpdf waa a tifaftiraha PDF-ku-salaysan taas oo noo ogolaanaysa in aan wax ka bedelno faylasha qaabkan. Waxay bixisaa tijaabo bilaash ah nooca Pro-na wuxuu u baahan yahay rukhsad bille ah wuxuuna leeyahay browserka kordhinta.
Ikhtiyaar kale oo online ah oo la heli karo si wax looga beddelo faylasha ayaa laga helayaa PDFescape, xal gebi ahaanba bilaash ah oo aan lahaynWaxay kuu ogolaanaysaa inaad tafatirto faylasha ilaa 10 MB ama 100 bog. Waxa kale oo lagu heli karaa iyada oo loo marayo kordhinta Chrome, Firefox, Edge ...
Thanks to this website, waan awoodnaa wax ka beddel, abuur oo arag dukumeenti ku qoran PDF, ku dar faahfaahin, buuxi foomamka oo geli dukumentiyada sirta ah ee la ilaaliyo, ilaa inta aan ognahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida loo edit gareeyo PDF files on Mac
"Bug" ku dhex jira Safari waxa uu ogolaadaa in macluumaadka akoonkaaga Google laga siidaayo
Kuhadlayaasha Ikea, muhiimada cusboonaysiinta Mac iyo wax ka badan. Toddobaadka ugu wanaagsan waxaan ka imid Mac